သူနာပြုခွား System ကိုစက်ရုံ China Manufacturers & Suppliers & Factory
သူနာပြုခွား System ကိုစက်ရုံ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 15 များအတွက်စုစုပေါင်း သူနာပြုခွား System ကိုစက်ရုံ ထုတ်ကုန်များ)
ထုပ်ပိုး: ထုပ်ပိုး: ပလပ်စတစ်အိတ်အတွင်း, ရေမြှုပ်အလယ်တန်းနှင့်အတူ, စက္ဏူထူ
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံသူနာပြုခွားစနစ် ETR ဆေးရုံသူနာပြုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်ကဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်မာစတာတယ်လီဖုန်းရေပိုက်, ဆန်းသစ်အကျဉ်းချုပ် fixed mode ကို,...
ထုပ်ပိုး: Packaging:With plastic bag inner,foam middle, carton
System ကိုကုန်ကျစရိတ် Calling ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူနာသူနာပြု
System ကိုကုန်ကျစရိတ် Calling ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူနာသူနာပြု လူနာခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Eter သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်ဆေးရုံ digital ဆရာဝန်တွေ, သူနာပြုများနှင့်လူနာများအကြားအင်အားကြီးဆက်သွယ်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်းဖန်တီးမှုစကားသံကိုသတိပေးသစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းသာရာဆောက်လုပ်ရေး, သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပေးရန်,...
ဆေးရုံဓါတ်ငွေ့ Generator ကိုစက်ရုံစျေး Making
ဆေးရုံဓါတ်ငွေ့ Generator ကိုစက်ရုံစျေး Making Generator ကိုစက်ရုံစျေးဖျေါပွခကျြပြုလုပ်ခြင်းဆေးရုံဓါတ်ငွေ့: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး, မြေ၌အသက်တာကိုထောကျပံ့တစ်ခုမရှိမဖြစ်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ETR ဆေးရုံဓါတ်ငွေ့ Generator ကိုစက်ရုံစျေးနိုင်ပါတယ် Making 93% ± 3%...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူက Wired Intelligent သူနာပြုခွားစနစ်
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူအသိဉာဏ်က Wired ဆေးရုံသူနာပြုခွားစနစ် ETR ဆေးရုံသူနာပြုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်ကဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်မာစတာတယ်လီဖုန်းရေပိုက်, ဆန်းသစ်အကျဉ်းချုပ် fixed...
ဆေးရုံသူနာပြုခွားစနစ်ကုန်ကျစရိတ် ETR ဆေးရုံသူနာပြုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်ကဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်မာစတာတယ်လီဖုန်းရေပိုက်, ဆန်းသစ်အကျဉ်းချုပ် fixed mode ကို,...
ရောင်းမည်ဆေးရုံသူနာပြုခွားစနစ် ETR ဆေးရုံသူနာပြုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်ကဆေးရုံများအတွက်မဆိုပိုင်ထိုက်သောအခွအေန၏အမှု၌သူနာပြုရုံးများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးပေးဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်မာစတာတယ်လီဖုန်းရေပိုက်, ဆန်းသစ်အကျဉ်းချုပ် fixed mode ကို,...
ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုစက်ရုံစျေးနှင့်အတူစက် Making ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 1. ETR ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုလုပ်ခြင်းစက်ဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက် compressed လေကြောင်းချမှတ်ခြင်းစက်လေ Compressor, ယေဘုယျ filter ကို, ပြီးနောက်-အေး, တိကျ filter ကို, ကာလဖြစ်ပါသည်လေကြောင်းလေမှုတ်စက်,...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုစက်ရုံ
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုစက်ရုံ ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 1. ETR ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုစက်ရုံဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက် compressed လေထုစက်ရုံလေထု Compressor, ယေဘုယျ filter ကို, ပြီးနောက်-အေး, တိကျ filter ကို, ကာလဖြစ်ပါသည်လေကြောင်းလေမှုတ်စက်, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့,...
ရပ်ကွက်သူနာပြု System ကိုစမတ်လူနာခေါ် ဆို. စနစ်
ရပ်ကွက်သူနာပြု System ကိုစမတ်လူနာခေါ် ဆို. စနစ် Eter ရပ်ကွက်သူနာပြု System ကိုစမတ်လူနာ Calling မှ System ကိုဆရာဝန်တွေ, သူနာပြုများနှင့်လူနာများအကြားအင်အားကြီးဆက်သွယ်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်းဖန်တီးမှုစကားသံကိုသတိပေးသစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းမသာဖြစ်သောဆေးရုံ digital ဆောက်လုပ်ရေး, သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပေးရန်,...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကို Generator ကိုစက်ရုံ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကို Generator ကိုစက်ရုံ ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 1. ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကို Generator ကိုစက်ရုံဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက် compressed လေကြောင်းစနစ်လေကြောင်းရန် Compressor, ယေဘုယျ filter ကို, aftercooler, တိကျ filter ကို, ကာလဖြစ်ပါသည်လေကြောင်းလေမှုတ်စက်, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့,...
System ကိုစျေးနှုန်းဖြည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးရုံအသုံးပြုမှုအောက်ဆီဂျင် Cylinder
System ကိုစျေးနှုန်းဖြည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးရုံအသုံးပြုမှုအောက်ဆီဂျင် Cylinder System ကိုစျေးနှုန်းဖြည့် 1.Latest ဆေးရုံအသုံးပြုမှုအောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖေါ်ပြချက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူဘူတာပစ္စည်းဖြည့် ETR အောက်ဆီဂျင် Cylinder ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။...
ခွဲစိတ်စုတ်ယူခြင်းစက် System ကိုစက်ရုံစျေး
ခွဲစိတ်စုတ်ယူခြင်းစက် System ကိုစက်ရုံဖျေါပွခကျြ ETR လွတ်လပ်စွာတစ်ဦးရေလက်စွပ်လေဟာနယ်စုပ်စက်တစ်ဓာတ်ငွေ့-ရေ separator တစ်လေဟာနယ် solenoid valve, ပိုက် fittings နှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်၏ရေးစပ်ထားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံလေဟာနယ်စုပ်စက်ယူနစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ရပ်ကွက်အာကာသသိမ်းပိုက်ခြင်းမရှိဘဲ,...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုဘူတာ
ဆေးရုံက Wired သူနာပြု Calling မှ Cord သည်စနစ်
ရောင်းမည် High Quality ဆေးရုံအိပ်ရာဌာနမှူး Panel ကို
သူနာပြုခွား System ကိုစက်ရုံ
သူနာပြုခွား System ကိုစျေး
က Wired သူနာပြုခွား System ကိုစျေး
သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်က Wired ဆေးရုံ
သူနာပြုခွား System ကိုစက်ရုံ သူနာပြုခွား System ကိုစျေး က Wired သူနာပြုခွား System ကိုစျေး သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်စက်ရုံ သူနာပြုခွားစနစ် သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုခလုတ်စနစ် သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်က Wired ဆေးရုံ IOT သူနာပြုခေါ်ဆိုမှုစနစ်